🥇 Xisaabinta atelier ah
Qiimeynta: 4.9. Tirada ururada: 776
Xisaabinta atelier ah
Fiidiyowga xisaabinta ee mulkiilaha
Dalbo xisaabinta atelier ah
Xisaabinta Atelier waa qayb muhiim ka ah socodka shaqada. Xakamaynta macnaheedu waa xisaabinta saldhigga macaamiisha iyo xakamaynta buuxda ee shaqaalaha iyo hawlahooda. Hadba sida ay u wanaagsan tahay nidaamka xisaabintu waa, macaamiisha badan iyo, sidaas awgeed, faa'iidada uu bixiyaha leeyahay. Ganacsadaha guuleysta wuxuu yaqaanaa sida loola socdo dhaqankooda. Xisaabinta tayo-sare leh waxay qaadataa otomaatiga howlaha ganacsiga, kumbuyuutarka iyo xog-war gelinta shaqada, iyo sidoo kale ku lug lahaanshaha nidaamka xisaabinta. Waxaas oo dhan waxaa bixiya barnaamij caqli badan oo leh buug xisaabeed oo gundhig ah oo si madax-bannaan u fuliya howlaha iyada oo aan la faragelin shaqaalaha. Nidaamka noocan ahi maahan oo keliya kaaliye, laakiin sidoo kale waa shaqaale fuliya amarrada su'aal la'aan iyo khaladaad la'aan.
Barnaamijka softiweerka ee ka socda soosaarayaasha USU, oo leh dhammaan astaamaha kor ku xusan, waxaa ku jira buuga xisaabinta atelier-ka, oo ay ku jiraan macluumaadka lagama maarmaanka u ah shaqada guuleysiga. Xisaabinta waxaa ka mid ah xakamaynta shaqaalaha, macaamiisha, amarrada, socodka lacagta, iyo dukumintiyada. Waxaas oo dhami waxay ku yaalliin hal meel oo waxa ilaaliya nidaam nabadgelyo oo lagu kalsoon yahay. Nidaamku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku sii hayso xisaabinta atelier-ka internetka, taasi waa, meel fog. Xubin ka mid ah shaqaaluhu uma baahna inuu yimaado xafiiska si uu wax uga beddelo ama dib ugu eego macluumaadka loo baahan yahay. Si tan loo sameeyo, waxay kaliya u baahan yihiin inay ka soo galaan arjiga guriga ama xafiis kale oo ay si fog ula socdaan. Waxay go'aansan karaan sida looga shaqeeyo barnaamijka ka socda USU.
Ganacsade fiiro gaar ah u leh xisaabinta ateliyeha waligiis kama cabanayo macaamiil yaraan iyo faa'iido. Haddii howlaha la abaabulay, ilaaliyaha ayaa si habsami leh u socda. Isaga oo maareynaya buuga atelier-ka, maareeyuhu wuxuu ka fiirsan karaa dhibaatooyinka dhinacyo kala duwan wuxuuna u xallin karaa sida ugu macquulsan uguna macquulsan ee horumarinta shirkadda. Thanks to hawsha falanqaynta dhaqdhaqaaqa dhaqaale, ganacsaduhu wuu arki karaa halka ilaha lagu kharash gareeyo iyo halka ugu wanaagsan ee hagista raasamaalka. Dhammaan dhaqdhaqaaqyada lacageed ee ay samaysay atelier-ka way u muuqan karaan maamulka diiwaanka si loogu sahlanaado waxaa lagu soo bandhigaa qaab jaantus iyo jaantusyo ah. Barnaamijka softiweerka ah, waxaad kala socon kartaa dhaqdhaqaaqa macaashka, waxaad arki kartaa kharashyada iyo daqliga soo gala, iyo sidoo kale inaad qiimeyso oo aad doorato istiraatiijiyadda horumarinta ugu fiican.
Ayadoo la kaashanayo miiska shaqaalaha, maamulku wuxuu kormeeri karaa shaqada shaqaalaha samatabixinta, isagoo arkaaya sida shaqaale kastaa shaqsiyan ugu shaqeeyo. Maamulaha ayaa go aan ka gaari kara sida loo abaalmariyo waxa ugu fiican ugana caawiyo shaqaalihii waxqabadka liitay inay horay u socdaan. Xisaabinta shaqaalaha waa mid aad muhiim u ah, maxaa yeelay waa mida wax ka geysaneysa soo bandhigida hab miyir leh oo kooxda ah, taas oo hubineysa tayada howlgalka shaqaalaha. Markuu shaqaaluhu ogaado himilooyinka uu leeyahay si uu natiijooyin u gaadho oo uu u helo gunno ama mushahar sare, sidoo kalena uu ogaado sida loo gaadho himilooyinka la doonayo, waxay isku dayaan oo ay u qabtaan si ka wanaagsan sidii caadiga ahayd. Haddii maareeyuhu ku guuleysto hanashada qaabkan, shaqada shaqaaluhu waxay noqoneysaa mid sii yaraata oo dhibaato yar.
Buugga dukumiintiyada xisaabaadka ayaa kuu oggolaanaya inaad ka hesho warbixinnada shaqaalaha waqtigeeda oo aad aragto dhammaan qandaraasyada lala galay macaamiisha. Tani waxay fududeyneysaa howlaha madaxa shirkadda, iyadoo waqtigooda iyo tamartooda badbaadineysa. Ogaanshaha sida loo ilaaliyo xisaabinta mulkiilaha sida ugu macquulsan ee shirkadda, maareeyaha ayaa fahansan ujeedooyinka iyo xeeladaha ay tahay in loo raaco koritaanka asxaabta.
Hoos waxaa ku yaal liiska kooban ee astaamaha USU. Liistada fursadaha way kala duwanaan kartaa iyadoo kuxiran qaabeynta nidaamka horumarsan.
Barxadda waxaa ku jira buugaag xisaabinta shaqaalaha, amarro, agab tolidda dharka iyo waxyaabo badan oo lagama maarmaan u ah shaqada atelier-ka.
Isku xirnaanta fudud waa dhadhanka dhammaan xubnaha shaqaalaha.
Maamuluhu wuxuu si madax-bannaan u dooran karaa naqshadda barnaamijka, isagoo beddelaya midabka daaqadaha iyo asalka shaqada.
Software-ka wuxuu kuu ogolaanayaa inaad dhowr buug oo koontarool ah isla mar wada qabato, isla mar ahaantaana aad wada shaqeyso.
Codsiga, waxaad ku shaqeyn kartaa koontada atelier ee internetka iyo shabakadda maxalliga ah.
Nidaamku wuxuu buuxiyaa foomamka dalabka iyo qandaraasyada macaamiisha.
Barnaamijka kumbuyuutarka, waad xakameyn kartaa isbeddelada ka dhacaya qaybta maaliyadeed ee atelier; falanqeeyaan dhaqdhaqaaqa macaashka, kharashaadka iyo dakhliga.
Nidaamku wuxuu gacan ka geystaa in lagu buuxiyo yoolalka ugu waaweyn ee shirkadda muddo cayiman gudahood.
Bakhaarka iyo qalabka maaliyadeed ayaa lagu xidhi karaa arjiga, kaas oo ka caawiya daabacaadda dukumintiyada, lacag bixinta iyo waxyaabo kaloo badan.
Gabi ahaanba shaqaale kasta oo atelier ah ayaa la tacaali kara barnaamijka, maxaa yeelay iskudhafkiisa fudud waxaa si gaar ah loogu fududeeyay dadka isticmaala kombiyuutarada shaqsiyadeed ee heerarka oo dhan.
Barxada waxaa isticmaali kara ateliyeyaasha, dukaamada dayactirka, waaxaha adeega gudaha iyo kuwa kale oo badan.
Nidaamku wuxuu kuu sheegayaa sida loo ilaaliyo xisaabtanka shaqaalaha aqoonta leh loona soo bandhigo hab miyir leh oo shaqada ah.
Thanks to buugga xakamaynta, maareeyuhu wuxuu awood u leeyahay inuu falanqeeyo howlaha xubnaha shaqaalaha ee dhammaan laamaha ku yaal magaalo, dal ama adduun.
Codsiga ka socda USU wuxuu ka jawaabaa su'aalaha shaqaalaha wuxuuna kula taliyaa iyaga gaar ahaan daqiiqado aan la fahmi karin.
Barxadda ayaa kuu oggolaaneysa inaad u dirto macaamiisha labadaba emayl iyo farriimo SMS ah, haddana shaqaaluhu uma baahna inuu waqti ku qaato inuu warqad u diro macmiil kasta si gooni ah, maxaa yeelay nidaamku wuxuu leeyahay hawl fariin ballaaran ah.
Iyada oo gacan laga helayo diiwaanka bakhaarka, maareeyuhu wuxuu awoodaa inuu xakameeyo helitaanka agabyo gaar ah oo lagama maarmaan u ah tolalka alaabada.
Markii aan rakibeyno barxadda, barnaamijkeenna ayaa ku xiri kara labada daabacad iyo boosteejada POS barnaamijka ka socda USU, kaas oo fududeynaya shaqada shaqaalaha.
Atelier iyo harqaan
Qalabaynta xisaabinta wax soo saarka harqaanka
Qalabaynta xisaabinta istudiyaha tolida
Xisaabinta aqoon isweydaarsiga dharka
Xisaabinta soosaarka dharka
Xisaabinta isticmaalka nudaha
Xisaabinta macaamiisha bixiya
Xisaabinta amarada amarada
Xisaabinta macaamiisha markay tolayaan
Xisaabinta kharashka ku baxa wax soo saarka tolida
Xisaabinta kharashka ku baxa warshadaha dharka
Accounting of dhar in atelier
Xisaabinta agabyada soosaarka dharka
Xisaabinta amarrada marka la tolayo
Xisaabinta soo saarista dharka
Xisaabinta dawaarka iyo hagaajinta dharka
Xisaabinta guriga moodada
Barnaamijka xisaabaadka ee dukaanka dawaarlaha
Barnaamijka xisaabaadka ee aqoon isweydaarsiga harqaanka
Nidaamka xisaabinta ee atelier
Barnaamijka warshada dharka
App loogu talagalay xisaabinta soosaarka dharka
App loogu talagalay guriga moodada
App loogu talagalay wax soo saarka tolida
App loogu talagalay aqoon isweydaarsiga dharka
Codsiga xisaabinta Atelier
Barnaamijka otomaatiga ee Atelier
Nidaamka otomaatiga ee Atelier
Nidaamka xakamaynta Atelier
Otomatiga xisaabinta atelier ah
Qalabaynta xisaabinta harqaanka
Soo saarida otomaatiga otomaatiga
Nidaamka otomatiga ee wax soo saarka harqaanka
Saldhig macmiil loogu talagalay wax soo saarka tolida
Dharka otomaatiga dharka
Maareynta soosaarka dharka
Otomaatiga isku dhafan ee wax soo saarka tolida
Barnaamijka kombuyuutarka ee wax soo saarka tolidda
Xakamaynta dharka tolidda
Xakamaynta aqoon isweydaarsiga dharka
Xakamaynta jadwalka shaqada ee soo saarista tolista
Crm soosaarka dharka
Soo dejiso barnaamijka wax soo saarka harqaan
Download barnaamijka atelier ah
Qalabaynta guryaha moodada ah
Xakamaynta guriga moodada
Saadaalinta iyo qorsheynta wax soo saarka harqaanka
Saadaalinta wax soo saarka dharka
Barnaamij bilaash ah dukaan dawaarle
Maareynta warshadaha dharka
Sida loogu soo jiito macaamiisha atelier ka
Sida loo xafido diiwaannada atelier-ka
Nidaamka macluumaadka ee atelier
Ogeysiinta wax soo saarka dharka
Ledger in atelier ah
Maareynta xisaabinta soosaarka dharka
Maareynta aqoon isweydaarsiga dharka
Maareynta wax soo saarka harqaan ee yar
Maareynta guriga moodada
Nidaamka maaraynta wax soo saarka harqaanka
Ku habboonaanta wax soo saarka dharka
Abaabulka iyo qorsheynta wax soo saarka harqaanka
Abaabulka xisaabinta soosaarka dharka
Abaabulka maamulka ee atelier ka
Abaabulka shaqada ee wax soo saarka harqaanka
Abaabulka shaqada ee atelier
Qorsheynta wax soo saarka harqaan
Xakamaynta wax soo saarka ee dawaarka dharka
Xakamaynta wax soosaarka aqoon isweydaarsiga dharka
Barnaamijyada xisaabinta harqaan
Barnaamijka xisaabinta ee soo saarista tolida
Barnaamijka xakamaynta saxeexa
Barnaamijka dharka loogu tolo
Barnaamijka xakamaynta wax soo saarka tolida
Barnaamijka xakamaynta aqoon isweydaarsiga dharka
Barnaamijka warshad dharka
Barnaamijka maaraynta tolida dharka
Barnaamijka maareynta dukaanka dawaarlaha
Barnaamijka maareynta wax soo saarka harqaan
Barnaamijka dharka tolidda dharka
Barnaamijka ganacsiga tolashada
Barnaamijka wax soo saarka tolida
Barnaamijka loogu talagalay warshadaha dharka
Barnaamijka ganacsiga dharka
Barnaamijka guriga moodka
Barnaamijka soo saarista dharka
Barnaamijka loogu talagalay salonka moodada
Barnaamijka ganacsiga tolidda dharka
Barnaamijka warshadaha harqaanka
Barnaamijka aqoon isweydaarsiga dharka
Barnaamij lagu xisaabtamayo nudaha
Barnaamijka xisaabinta tolida
Nidaamka otomaatiga atelier tolidda
Tolida barnaamijyada ganacsiga
Barnaamijka xakamaynta tolida
Xakamaynta wax soo saarka tolida
Maaraynta wax soo saarka tolida
Nidaamka xakamaynta dukaanka
Isweydaarsiga iswada aqoon isweydaarsiga
Tolida barnaamijyada aqoon isweydaarsiga
Software loogu talagalay atelier
Software loogu talagalay wax soo saarka harqaan
Nidaamka wax soo saarka tolida
Nidaam loogu talo galay qofka soo diraya
Nidaamka istuudiyaha tolida
Nidaamka aqoon isweydaarsiga dharka
Miisaska loogu talagalay guryaha moodada ah
Miisaska loogu talagalay qofka soo diraya
Miisaska wax soo saarka harqaanka
Daabacaadda barnaamijka aqoon isweydaarsiga
Maxaa looga baahan yahay atelier shaqeeya